Paradise Goes on Show at Reggia di Caserta | Italia
Location: Home » fandefasana » Firenena | Region » Italia » Paradisa mandeha amin'ny fampisehoana ao amin'ny Reggia di Caserta
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Destination • Hospitality Industry • Italia • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Trending
sary avy amin'i M.Masciullo
Nanomboka ny 1 Jolay ka hatramin'ny 16 Oktobra, ny trano fonenan'ny mpanjaka lehibe, a Lovan'ny UNESCO, dia hampiantrano fampirantiana mitondra ny lohateny hoe Sombim-paradisa, Zaridaina tamin'ny fotoanan'ny Reggia di Caserta, nokarakarain'ny talen'ny Reggia di Caserta Tiziana Maffei, Alberta Campitelli ary Alessandro Cremona.
Ao amin'ny efitranon'ny Queen's Apartment izay mijery ny fomba fijery tsara tarehy tsy manam-paharoa amin'ny Royal Park miaraka amin'ny toeram-pisakafoanana an-tsehatra, dia hankalazaina ho toy ny trano fonenana feno sy voatahiry tsara indrindra izay Charles de Bourbon, mpanjakan'i Naples tamin'ny 1734, sy ny vadiny, Maria Amalia avy any Saxony, voatendry haneho ny heriny sy ny kolontsainy cosmopolitan be pitsiny amin'ny fampirantiana iray izay manambatra ny fikarohana siantifika amin'ny fahatsapana ny zava-bitany ny endrika manavao.
Manodidina ny 200 eo ho eo ny fampirantiana ahitana sary hoso-doko, sary, sary sokitra, herbaria, boky, ary zava-kanto miaraka amin'ny sary sy fanehoana an-tsary mitantara ny tantaran'ilay zaridaina miaraka amin'ny foto-kevitra sy tantara nalaina avy amin'ny Reggia di Caserta mba hampidirina an-tsehatra sy hitantarana manontolo. rafitra villa sy zaridaina mifamatotra sy mahatafiditra ny saikinosy manontolo nanomboka tamin'ny Renaissance ka hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19. Ny vokatr'izany dia kaleidoscope misy fanehoana izay, ao anatin'ny fahasamihafan'ny tontolony, ny modely ara-kolontsaina ary ny fomba fiainany, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny zavaboary, dia mampitovy ny zaridainan'i Edena very izay efa nirin'ny olona hatry ny ela.
“Ny valan-javaboary sy zaridaina manan-tantara dia ampahany amin'ny kolontsaina lalina indrindra any Eoropa.”
Nanampy i Tiziana Maffei hoe: “Ary ny anjara andraikitry ny fahaizan'i Italia amin'ny tontolon'ny tany taloha dia tsy azo iadian-kevitra, fa ankehitriny, amin'ny farany, dia mahazo fahatsiarovan-tena tanteraka momba izany isika. Ny fanapahan-kevitra hanokana ampahany manokana amin'ny famatsiam-bola PNRR ho amin'ny famerenana sy fitantanana ireo toerana mahafinaritra ireo dia manome antsika fahafahana handray andraikitra amin'ny fikarakarana an'io lova io, na dia sarobidy aza izy io.
"Ny fampirantiana ao amin'ny Reggia di Caserta, vokatry ny fikarohana mitaky ny fiaraha-miasa amin'ny andrim-panjakana sy manam-pahaizana maro, dia mampiseho, ho an'ny manam-pahaizana sy ny mpihaino midadasika kokoa, ny soatoavina samihafa miafina ao ambadik'ireo fanehoana kely momba ny Paradisa ireo. Mamirapiratra ihany koa amin'ny filàna maika ny fiarovana azy ireo mba hiantohana ny fahafahan'izy ireo miditra sy ny fahafahana manolotra ny hatsarany ho an'ny taranaka ho avy."
Mifantoka amin'ny lafiny samihafa amin'ny tantaran'ny Reggia di Caserta's Royal Park, ity fampirantiana manankarena ity koa dia mamerina mijery ny tantaran'ny “zaridaina” tahaka izany.
Endri-javatra tsy tapaka amin'ny fisainan'ny olombelona nandritra ny taonjato maro sy manerana ny sivilizasiona samihafa, ny foto-kevitra dia niteraka modely maro isan-karazany. Ny famolavolana ara-pomba ny zaridaina amin'ny fomba italiana na frantsay, na ny fomba laissez-faire kokoa amin'ny zaridaina anglisy, mifanaraka amin'ny fivoaran'ny siansa botanika, dia maneho ny toe-javatra ara-kolontsaina samihafa naneho azy ireo.
Hoy i Alberta Campitelli: “Teo am-pamoronana zaridaina, dia nitady hanesorana ilay hevitra hoe maizina sy mampidi-doza ny zavaboary. Ny habakabaka mirindra sy voalamina ao amin'ny zaridaina iray dia microcosm anjakan'ny olombelona ary evocative ny zaridainan'i Edena.
“Lohahevitra maromaro no miampita ao amin'ny zaridaina: ny zaridaina dia fitantarana ampitaina amin'ny tandindona; dia ny fitadiavana izany; dia ny fampitana hafatra; andrana ara-tsiansa izany; zava-manan'aina izay teraka sy miova ary manjavona.
“Ny sary hoso-doko dia mampindrana azy io ho tsy mety maty, manome kristaly ny fotoanan'ny famirapiratana ary mankalaza ny mpiaro azy. Ao amin’ny kaleidoskopy manjelanjelatra misy sary mandrafitra ilay fampirantiana, ireo mpitsidika dia miditra amin’ity tontolo mahavariana izay ahafahan’ny tsirairay mahita ny paradisany manokana.”
Ny Museo Verde del Complesso Vanvitelliano lehibe, (tranombakoka maitso ao amin'ny komplex Vanvitellian) mirehareha zaridaina mandrakotra 123 hektara, ala ny 60 amin'ireo, ary lakandrano mirefy 40 km eo ho eo no naorina nanomboka tamin'ny 1752 ho an'ny famolavolana voalohany nataon'i Luigi Vanvitelli ho toerana malalaka mifandray amin'ny Lapan'ny Mpanjaka izay natao hampamirapiratra izao tontolo izao. Izy io dia mampifandray tsara ny fanondroana ara-kolontsainan'i Charles avy any Bourbon amin'ny an'ny raibeny malaza Louis XIV sy ny maodely manerantany an'i Versailles, miaraka amin'ny reniny Elisabetta Farnese ary miaraka amin'ny fitaoman'ny Eoropeana avaratra an'ny vadiny Maria Amalia avy any Saxony.
Ity endrika mahavariana ity dia nanan-karena bebe kokoa tamin'ny antsasa-taona taty aoriana niaraka tamin'ny zaridaina anglisy manavao sy manaitra izay notendren'i Maria Carolina avy any Lorraine. Izy io dia manambatra ny tontolon'ny rano sy loharano miaraka amin'ny fanampiana voalanjalanja amin'ny tontolon'ny rustic sy an-dranomasina tsy manam-paharoa amin'ny fisian'ny tendrombohitra Vesuvius, ka lasa toerana tsara indrindra hanehoana ny halehiben'ny zaridaina iray amin'ireo mahavariana sy marefo indrindra. singan'ny Eoropeana, ary indrindra ny maha-kolontsaina an'i Italia.
“Rehefa niditra ny zaridainan’ny Reggia di Caserta”, hoy ny fanamarihan’i Alessandro Cremona, “dia asitrika ao anatin’ny iray amin’ireo hevitra idiran’ny zaridaina tandrefana sy ny zaridaina italiana, indrindra fa ny zaridaina italiana. Ny fifandraisana amin'ny “fonenana” sy amin'ny tontolo manodidina, ny fialam-boly sy ny utilitaire tanjona, ny fankalazana sy ny famenoana tanjona, ary ny fahatsapana ny fahatsapana sy ny tsiro eo amin'ny endrika ofisialy sy ny 'fomba anglisy' kokoa amin'ny tontolo. Ny fampirantiana dia mitarika ny mpitsidika amin'ity fahasarotana miavaka ity, mamakivaky ny labyrinth any an-danitra amin'ny zaridaina voaloko sy sary an-tsaina, mandrisika ny mpitsidika "hifaly" amin'ny fahitana ny zaridainan'i Vanvitelli.
Ny fizarana isan-karazany dia ahitana asa maro, maro amin'izy ireo no tsy mbola hita ampahibemaso teo aloha, avy amin'ny tranombakoka sy andrim-panjakana italiana sy Eoropeana malaza, fanangonana manokana, tranomboky ary andrim-panjakana hafa. Ireo mpanakanto maro nankalazaina dia ahitana ireo manam-pahaizana manana ny kalitaon'i Gaspar van Wittel, Claude Lorrain, Paolo Anesi, Pietro ary Gianlorenzo Bernini, Hubert Robert, Hendrick van Cleve III, Jules-César-Denis van Loo, Giusto Utens, Joseph Heintz ilay zandriny ary ny hafa. vedutisti malaza, miaraka amin'ny anjara toerana lehibe nilalao, mazava ho azy, avy amin'i Jacob Philipp Hackert izay nanokana ny ankamaroan'ny asany ho an'ny zaridaina sy ny tany ao Campania sy atsimon'i Italia.
Ny fizarana dia mamorona lohahevitra izay maka ny hevitr'izy ireo avy amin'ny Reggia di Caserta sy ny tantarany, mampifandray sy mampitaha izany amin'ny vokatry ny vaomiera hafa sy ny toe-javatra hafa:
– ny Reggia di Caserta sy ny maodely misy azy, miaraka amin'ny sariitatra nankalazain'ny Reggia di Caserta's Royal Park napetraka miaraka amin'ireo zaridaina izay fantatr'i Charles sy Maria Amalia tany amin'ny tany niaviany ary nanampy tamin'ny famolavolana ny tsirony;
- ny zaridaina sy ny tontolo iainana, fifandraisana nasongadina tamin'ny fomba fijerin'ny zaridaina malaza manomboka any Campania ka hatrany Lazio, Marche, Tuscany, ary Piedmont, nolokoin'ireo mpanakanto lehibe indrindra tamin'ny vanim-potoana samihafa tafiditra;
- ny zaridaina amin'ny maha-sehatra an-tsehatra dia maneho ny halehiben'ny fampisehoan'ny hery, ny lanonana ary ny tantara an-tsehatra dia nanana zaridaina foana ho toerana nofidiany, nampifanarahana tamin'ny hetsika manokana nampiantranoana;
- ny rano sy ny zaridaina izay ny rano no tena zava-dehibe indrindra amin'ny fanasan-drano, ny loharano ary ny lalan-drano, sady manome fomba fijery mahafinaritra ny farihy, renirano ary ranomasina;
- ny zaridaina sy ny tany efitra dia fanomezam-boninahitra ny ala sy ny toeram-ponenana izay mameno ny villa sy ny zaridaina, manomboka amin'ny fomban'ny zaridaina Medici ka hatramin'ny taonjato faha-19;
– ny zaridaina ho toerana fitantarana ara-pivavahana sy angano, manomboka amin'ny sarin'i Kristy “ilay zaridaina” tamin'ny alalan'ny fizarana angano sy literatiora ary hatramin'ireo fanoharana momba ny vanim-potoana, toy ny an'i Pietro sy Gianlorenzo Bernini;
- botanika ao an-jaridaina, ny singa fototra amin'ny maha-protagonista manana andraikitra sy asa isan-karazany toy ny, ohatra, "tulipomania" na ny fampidirana zavamaniry hafakely sy ny lazan'ny siansa botanika.
Ny fiantraikan'ny fampirantiana dia noho ireo sanganasan-kanto marobe aseho manodidina ny lohahevitra mahaliana tsirairay. Saingy voalohany indrindra, dia mifototra amin'ny fikarohana ara-tsiansa sy ara-tsiansa lalina miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ireo manam-pahaizana sy manam-pahaizana tena manam-pahefana, manolotra fisaintsainana momba ny ampahany amin'ny lovantsika izay manan-danja lehibe amin'izao fotoana manokana amin'ny tantaran'ny olombelona izao. Izany dia satria amin'izao fotoana izao dia mety mihoatra noho ny teo aloha, ireo andrim-panjakana dia mampiroborobo ny hetsika ho amin'ny fiarovana sy fanatsarana ny zaridaina ara-tantara amin'ny lafiny ara-kolontsaina sy maha-zava-dehibe azy ireo ho fiara ho an'ny fiahiana ara-tsosialy, noho ny fanokanana vola be ho an'izy ireo. fanarenana sy fitantanana. Mifanindran-dalana amin'izany, ny filàna fanofanana manokana sy kendrena amin'izany fifandraisana izany dia fantatra ihany koa ankehitriny.
Miaraka amin'ity fandraisana anjara amin'ny fahalalana ity dia misaotra (koa) amin'ny hakanton'ny toerana tsy manam-paharoa toy ny Reggia di Caserta, mikendry ny hampiroborobo ny fahatsiarovan-tena bebe kokoa momba ny maha-zava-dehibe sy ny hasarobidin'ity lova ity izahay, na dia marefo toy ny sarobidy aza, ka mendri-kaja sy mihaja ny vokatry ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny zavaboary.
Ny fampirantiana ihany koa dia manome antsika fahafahana hanandrana ny teknolojia ankehitriny noho ny mpiara-miasa ara-teknika ao amin'ny Kainon Foundation, miaraka amin'ny fanavaozana virtoaly ny ampahany voalohany amin'ny zaridaina novolavolain'i Luigi Vanvitelli tao amin'ny Fanambarana ny sary nankalazaina sy ny mari-piatoan'ny mpanakanto ankehitriny. mandika ny hevitry ny zaridaina ho Paradisa mety.
Ny fampirantiana, nokarakarain'ny Museo Della Reggia di Caserta miaraka amin'ny Opera Laboratori, dia mandray soa avy amin'ny birao mpanolo-tsaina manam-pahaizana iraisam-pirenena malaza ary avy amin'ny fandraisan'anjaran'ny Orti Botanici di Napoli e Portici.
Ny hetsika dia novokarina miaraka amin'ny Camera di Commercio di Caserta ary miaraka amin'ny fanohanan'ny Amici della Reggia di Caserta, Colonnese&Friends, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Grandi Giardini Italiani ary ny European Route of Historic gardens.
More on: Reggia di Caserta
Hanavotra kojakoja sinoa ve ny Rosiana kivy...
Hafatra avy amin'ny Filohan'ny New Skal Guam
Nandrara ny praiminisitra Japon i Rosia tsy hiditra...
Fizahan-tany LGBT: Mahasoa sy Mahery
Nanontany ny Jet Airways ireo Opérateur Tour India: Aiza ny anay...
Vienne dia misarika ny mpamokatra sarimihetsika iraisam-pirenena amin'ny € 2 tapitrisa ...
BOC Aviation dia manafatra fiaramanidina vaovao 80 avy amin'ny Airbus
Learning Journeys ary izy dia manomboka ny "A...
Roe v Wade noravan'ny Fitsarana Tampony Amerikana
Cathay Pacific sy Saber mpiara-miombon'antoka amin'ny fidiram-bola vaovao...
Bartlett dia nandray ny American Airlines ho an'i Ian Fleming...
Ny maha-zava-dehibe ny mari-pamantarana ara-tontolo iainana ho an'ny fizahan-tany hitombo amin'ny maha mpandeha...
Fiovan'ny mpitarika vaovao ao amin'ny Pegasus Airlines
GVB dia mamerina ny serivisy Trolley Guåhan maimaimpoana ho an'ny fizahantany...